Vatsigiri vorumbidza Nakamba | Kwayedza
Vatsigiri vorumbidza Nakamba
04 Oct, 2019 - 00:10	 2019-10-04T12:05:09+00:00 2019-10-04T00:04:18+00:00 0 Views
VATSIGIRI veAston Villa vari kurumbidza zvikuru chizvarwa chemuZimbabwe Marvelous Nakamba padandemutande reTwitter zvichitevera kutamba kwaakaita zvinodakadza svondo radarika apo chikwata chake chakaita mangange 2-2 neBurnley kuVilla Park.
Rakange risiri zuva rekufara reAston Villa iyo mwaka uno yarasa zvibodzwa zvisere zvayainge ichifanirwa kuwana muPremier League.
Asi Nakamba ari kurakidza kuti mutambi wepamusoro izvo zvakaona murairidzi wechikwata chake ichi, Deam Smith, achimutenga nemari inosvika 11 miriyoni paunzi.
Mumutambo wavo neBurnley, Nakamba akatamba zvemhando yepamusoro.
Kubva paakatengwa neAston Villa mwaka uno achibva kuClub Brugge yekuBelgium, Nakamba akwanisa kutamba mitambo mina kuchikwata ichi iyo inoti mitatu yemuEnglish Premier League kozoti mumwechete mumakwishu eCarabao Leagu Cup uyo wakave mutambo wake wekutanga.
Chikwata chake parizvino muEPL chatamba mitambo minomwe asi Nakamba haana kukwanisa kutamba yose sezvo akambenge akakuvara apo aitambira chikwata chenyika chemaWarriors mumutambo weAfrica Cup of Nations uyo wakaitirwa kuEgypt nguva yadarika.
Asi kubva apora, Nakamba ari kurakidza kuti arovera hoko muchikwata chaSmith zvichitevera kutamba kwaaita mitambo mitatu yadarika.
Izvi zvamuona zvakare achigarisa pabhenji vamwe vatambi vakaita saDouglas Luiz chizvarwa chekuBrazil uyo aimbotambira Manchester City naHenri Lansbury chizvarwa chemuEngland uyo akambotambira Arsenal.
Ane bhora kunyangwe asina, Nakamba anorakidza kuti mutambi wepamusoro.
Mashoko anotevera ndiwo mamwe ezvakataurwa nevatsigiri veAston Villa padandemutande reTwitter.
Zviri pachena handina kufara nezvabuda mumutambo uyu, asi regai nditi ndinofarira zvandiri kuona pana Nakamba????#avfc
Chandakatora kubva pamutambo wedu, Marvellous Nakamba ari kukurumidza kuita mumwe wevatambi vandinofarira #avfc
Nakamba ange asiri kubatika nhasi – HITC Sport